Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Mampanahy ny toe-draharaha
INTY SY NDAY : Mampanahy ny toe-draharaha
Nisy trangan-javatra mahalasa fisainana ka tokony dinihina lalina omaly alahady tamin’iny lalampirenena fahatelo mihazo an’Anjozorobe iny. Raha ny fanazavana avy amin’ny zandarmariam-pirenena dia nisy fiara telo izay an’olon-tsotra (miloko mainty ny mari-pamantarana azy) ary niloko matroka koa ny fitaratra, nandeha mafy. Ny fiara teo aloha dia misy ilay mari-pamantarana antsoina hoe “gyrophare”. Tsy nety nijanona teo amin’ny sakana ara-pahasalamana sy ara-pandriampahalemana teo amin’ny fiholahan-dalana ho any Ambohimanga Rova ireo fiara ireo, hoy ihany ny Zandarmariam-pirenena. Ny tolakandro, rehefa niverina nitodi-doha an’Antananarivo ireo fiara ireo, hoy ihany ny mpitandro ny filaminana, dia nojeren’ny mpitandro ny filaminana, toy ny fiara rehetra, narahi-maso, teo Talatan’i Volonondry. Nanda tsy nety nosavain’ny zandary ireo olona tao anatin’ireo fiara ireo, hoy ihany ny zandary, ary ny iray dia nilaza fa “depiote “, izay sady nandrahona an’ireo mpitandro ny filaminana no nanompa, ary nilaza fa “ny filoha Ravalomanana no miaraka aminay amin’izao fiara mitandahatra izao”.
Manao ny asanay izahay, hoy ny zandary, ary tsy misy filazana mialoha fa ny fiara toa izao na toa itsy dia fantatra mialoha ny ao anatiny, sady ny fitaratra matroka. Rehefa tonga teo amin’ny fiholahan-dalana hiazo an’Ambohimanga Rova indray dia mbola nanda tsy nanaiky nosavaina ireo fiara.
Teo anatrehan’izany dia nampahatsiahy ny zandarmariam-pirenena fa “fepetra takian’ny lalàna ny fanaraha-maso eny an-dalambe ho fampanjariana ny fandriampahalemana sy ny filaminana ka tsy maintsy manaiky ny fepetra fanaraha-maso sy fisavana ny rehetra”. Nisy mihitsy ny fampahatsiahivan’ny zandarmariam-pirenena ny didim-panjakana 63-253 tamin’ny faha-9 May 1963, ao amin’ny andininy faha-121, momba ny fanatanterahan’ny zandary ny asany fa “manana zo hampiasa ny fitaovam-piadiana eny aminy ny zandary raha misy ny fandavana na tsy fanekena harahi-maso na hosavaina toa izany”.
Izany tranga izany no misarika ny fisainana fa mampanahy be ihany ny toe-draharaha. Amin’ny lafiny iray dia tsy tokony hampananosarotra ny asan’ny mpitandro ny filaminana ny rehetra, ary isan’izany ny mpisehatra politika, ary ao anatin’izany ny olom-boafidy toy ny depiote ary indrindra fa izany Filohampirenena teo aloha izany. Tsy misy antony tokony handavana na handrahonana na hanompana ny zandary manao ny asany. Ireo zandary rahateo tsy mahafantatra ny fiara mitondra an’iza na iza. Etsy ankilany kosa, toa mba fantatry ny mpitandro ny filaminana mandrindra ny fifamoivoizana eny an-dalambe ihany koa anefa ny fiaran’ireo olona ambony eto, ary indrindra fa ny fiaran-dRavalomanana. Ravalomanana rahateo, manana ny satany amin’ny maha-filohampirenena teo aloha azy. Angamba kosa, tafahoatran’ny mety ny filazana fa “hampiasa fitaovam-piadiana ny zandary raha tsy manaiky hosavaina ny fiara toa ireny”. Marina fa tsy nanonona ny anaran’iza na iza ny zandary fa nampahatsiahy ny voalazan’ny didy aman-dalàna, saingy misy hatrany ny fepetra azo raisina na ampiharina amin’ny tranga manokana, ka isan’ny tranga manokana ny momba ny fiaran’ny filoha teo aloha sy ny olom-boafidy toy ny depiote. Sarotra ny hino fa tsy fantatry ny zandary amin’iny lalampirenena fahatelo iny ny fiaran’ny depiote eny sy ny mpitondra an-dRavalomanana. Tsy misy antony koa anefa tokony hampanahy na hatahoran’ireny depiote ireny, raha tsy hoe mahina amin’ny “ratsy tiany hatao izy”, ka hanompa na handrahona ny mpitandro ny filaminana.
Enga anie ka mba tsy ho endriky ny fifampihantsiana izany rehetra izany fa ho loza.